I-10 yamatyala alungileyo e-motorola moto g (i-3rd gen, uhlelo luka-2015)
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-10 yamatyala amahle kakhulu kwi-Motorola Moto G (uhlobo lwesithathu, uhlelo luka-2015)
I-10 yamatyala amahle kakhulu kwi-Motorola Moto G (uhlobo lwesithathu, uhlelo luka-2015)
IMotorola Moto G ayisiyeyemveliso ephezulu. Ayinazaphuli zirekhodi zomgangatho, kwaye ayizukuphumelela nakuphi na ukhuphiswano lobuhle nangaliphi na ixesha kungekudala. Okwangoku akukho nto ibalulekileyo xa umlinganiso ogqwesileyo we-bang-for-the-buck weMoto G uyenze yaba yifowuni ethengisa kakhulu ye-Motorola kunye neapos. Kwaye amathuba okuba i-Moto G & apos; iteration yesithathu ayizukuthandwa kangako kunangaphambili.
Ngoku, upapasho luka-2015 lweMoto Moto G ayisiyiyo into ebanjwa ngesandla. Njengombandela wenyani, iyamelana nokungena kwamanzi, njengoko kubonisiwe sisatifikethi sayo se-IPX7. Amaconsi kunye namaqhuma, kwelinye icala, angonakalisa iMoto G enikwe amandla aneleyo. Kungenxa yoko le nto ukuxhobisa eyakho imeko ekhuselayo ngokuqinisekileyo ingumbono olungileyo. Kwaye sinokuba nayo nje le nto.
Emva kokukhangela ngokucokisekileyo i-intanethi, size noluhlu lwamatyala kwisizukulwana sesithathu iMoto Moto Moto G. Kwaye ezi zili-10 zezona meko zeMoto G ezilungileyo onokuzifumana ngoku. Nokuba ufuna ikhava encinci kunye nokukhanya okanye ityala elinzima nelomeleleyo lesikrweqe, wena kunye neapos kunokwenzeka ukuba ufumane ukhetho olufanelekileyo kwisilayidi esingezantsi.
Ezona meko zintle zeMoto Moto G (2015)
lg v10 nougat t mobile
kukangaphi ukuphucula ifowuni
Umhla wokukhutshwa kwegesi s4
I-Apple ithi ukuvumela ukulayishwa kwe-app kwi-iOS kuya kutyhila abasebenzisi kwizoyikiso ezinkulu zokhuselo
Eyona nto iphambili kwiGoogle Pixel 3 kunye nePixel 3 XL: ukusuka kubuncinci ukuya kumbhoxo
I-T-Mobile iphakamisa ixabiso lekhithi yokuqala ye-SIM ukuya kwi- $ 20; ikhowudi yekhuphoni izisa amaxabiso asezantsi njenge- $ 0
Uphengululo lwe LG V10
IVerizon & apos; s 'Uyandiva ngoku?' U-pitchman ngoku une-Sprint
IMotorola ikhupha ii -apps ezimbini zokulawula iiMoto kwiMoto Z Droid kunye neMoto Z Force Droid
Njani: Qalisa iVerizon Samsung Galaxy Qaphela 3
Isiphathi se-agnostic SIM sika-Apple kwi-iPad Air 2 entsha iyatshixwa ukuba ukhetha i-AT & T.
Ukunyusa iselfowuni ukubonelela nge-intanethi yasimahla ekhawulezayo yeselfowuni kubathengi abafanelekileyo
UGoogle Duo ufumana amanqaku amatsha kuhlaziyo lwamva nje